KM Healthcare Myanmar Co., Ltd မှ ပြန်လည်အသုံးပြု၍ရသော Mask များ လာရောက်ထောက်ပံ့လှူဒါန်း - ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့ - Bago Regional Government
Home / တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့နှင့် ဌာနဆိုင်ရာများ / KM Healthcare Myanmar Co., Ltd မှ ပြန်လည်အသုံးပြု၍ရသော Mask များ လာရောက်ထောက်ပံ့လှူဒါန်း
May 22, 2020	တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့နှင့် ဌာနဆိုင်ရာများ, ပဲခူးမြို့နယ်, သတင်းမှတ်တမ်းများ 83 Views
ပဲခူး မေ ၂၂
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ရုံး၊ ဝန်ကြီးချုပ်၏ ဧည့်ခန်းမသို့ မေလ(၂၂)ရက်နေ့၊ နံနက်(၁၀)နာရီအချိန်က ပဲခူးမြို့၊ ပြည်ပစက်မှုနယ်မြေရှိ KM Healthcare Myanmar Co., Ltd မှ ပြန်လည်အသုံးပြု၍ရသော Mask (၄၅၀)ခုအား လာရောက်ထောက်ပံ့လှူဒါန်းခဲ့သည်။
ရှေးဦးစွာ KM Healthcare Myanmar Co., Ltd , MD. Mr. Lee Dea Chun က ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်း COVID-19 ကာကွယ်၊ ထိန်းချုပ်၊ ကုသခြင်းလုပ်ငန်းများတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်လျက်ရှိသော ဝန်ထမ်းများ အန္တရာယ်ကင်းစွာ ပြန်လည်လျှော်ဖွတ်ပြီး ရေရှည်အသုံးပြု၍ရသော Mask များအား ထုတ်လုပ်၍ လာရောက်ထောက်ပံ့လှူဒါန်းပေးရခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ ထပ်မံ၍လည်း လိုအပ်လာပါက ပဲခူးမြို့ ဆေးရုံကြီးအတွက်လည်း ကျန်းမာရေးသုံးပစ္စည်းများ ဆက်လက် ထောက်ပံ့လှူဒါန်းပေးသွားရန် စီစဉ်ထားပြီးဖြစ်ပါကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
ထို့နောက် KM Healthcare Myanmar Co., Ltd , MD. Mr. Lee Dea Chun နှင့် တာဝန်ရှိသူများက ပြန်လည်အသုံးပြု၍ရသော Mask (၄၅၀)ခုအား ပေးအပ်ရာ၊ ဝန်ကြီးချုပ် ဦးဝင်းသိန်းမှ ဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်းလွှာ ပြန်လည်ပေးအပ်ပြီး ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားခဲ့သည်။
KM Healthcare Myanmar Co., Ltd အနေဖြင့် မေလ(၂၁)ရက်နေ့တွင် လူဝန်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ဝန်ကြီး ဦးထွန်းထွန်းဦးအား ပြန်လည်အသုံးပြု၍ရသော Mask (၃၀၀)ခု၊ MIC သို့ ပြန်လည်အသုံးပြု၍ရသော Mask (၁၅၀)ခု၊ ပဲခူးပြည်သူ့ဆေးရုံအုပ်ကြီး ဒေါက်တာရန်နိုင်မောင်ထံသို့ Surgical Gown (၂၀၀)စုံနှင့် ပြန်လည်အသုံးပြု၍ရသော Mask (၁၅၀)ခုတို့အား ထောက်ပံ့လှူဒါန်းပေးခဲ့ပြီး၊ ဆက်လက်၍ လူမှုဖူလုံရေးဦးစီးဌာနသို့ Surgical Gown (၂၀၀)စုံနှင့် ပြန်လည်အသုံးပြု၍ရသော Mask (၁၅၀)ခု၊ ပဲခူးခရိုင်မီးသတ်ဦးစီးဌာနသို့ ပြန်လည်အသုံးပြု၍ရသော Mask (၁၀၀)ခုတို့အား ထပ်မံထောက်ပံ့လှူဒါန်း ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။
အခမ်းအနားသို့ ဝန်ကြီးချုပ် ဦးဝင်းသိန်းနှင့် ဝန်ကြီးများ၊ လုံခြုံရေးနှင့်နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီး ဗိုလ်မှူးကြီးလှမျိုးရွှေ၊ အစိုးရအဖွဲ့ အတွင်းရေးမှူး ဦးခင်မောင်ဆန်းနှင့် တာဝန်ရှိသူများ၊ KM Healthcare Myanmar Co., Ltd မှ Mr. Lee Dea Chun ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်များ တက်ရောက်ခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။